राप्रपा अध्यक्षमा कमल थापा भर्सेस राजेन्द्र लिङ्देन, कसले मार्ला बाजी ? - ramechhapkhabar.com
राप्रपा अध्यक्षमा कमल थापा भर्सेस राजेन्द्र लिङ्देन, कसले मार्ला बाजी ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष कमल थापा र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनबीच प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । थापा र लिङ्देन दुवैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
आज थापाले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा राप्रपा फुट्न नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले राप्रपा कुनै हालतमा फुट्न नदिने कसम समेत खाइसकेका छन् । राप्रपाको महाधिवेशन १५ मंसिरबाट हुँदैछ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।